Xiddigaha kooxda PSG oo u duulay dalka Shiinaha… (Miyuu safarkaas qeyb ka ahaa Neymar Jr?) – Gool FM
Xiddigaha kooxda PSG oo u duulay dalka Shiinaha… (Miyuu safarkaas qeyb ka ahaa Neymar Jr?)
Haaruun July 23, 2019
(Paris) 23 Luulyo 2019. Weeraryahanka xulka qaranka Brazil ee Neymar Jr ayaa si xoog leh loola xiriirinayaa inuu u dhaqaaqi doono Barcelona ama Real Madrid, laakiin waxa uu la joogaa xiddigaha kooxda PSG.
Neymar Jr ayaa lagu daray 33 ciyaaryahan ee kooxda Paris Saint-Germain uga qeyb galaya ciyaaraha isu diyaarinta xilli ciyaareedka cusub kuwaasoo safar ku maraya Shiinaha, xilli mustaqbalkiisa uu mugdi weyni ku jiro.
Tababare Thomas Tuchel ayaa ciyaartoydiisa u kaxaysay Shiinaha, halkaasoo ay ku sugnaan doonaan laga bilaabo 23 July illaa 4 bisha Agoosto, isla markaana ay halkaa ku soo ciyaari doonaan kulamo saaxiibtinnimo oo qeyb ka ah isu diyaarinta xilli ciyaareedka.
PSG ayaa indhaha ku haysa inay difaacato horyaalka Ligue 1 isla markaana ay u tartanto koobka horyaallada Yurub ee Champions League xilli ciyaareedka soo aaddan.
27-sano jirkaan Neymar Jr ayaa si weyn loola xiriirinayay inuu dib ugu laaban doono kooxdiisii hore ee Barcelona, sidoo kale waxaa si layaab leh loo wariyey inuu u dhaqaaqi doono Real Madrid, laakiin hadda waxa uu qeyb ka yahay xiddigaha kooxdiisa PSG ee u safray dalka Shiinaha.
Magacyada xiddigaha kooxda PSG ee maanta u safray dalka Shiinaha:-
Si kastaba ha ahaatee, waxaa kooxda PSG dib uga soo biiri doona 31 bishaan July xiddigaha kala ah CHOUPO-MOTING Eric-Maxim, DI MARIA Angel, MARQUINHOS, PAREDES Leandro iyo THIAGO SILVA kuwaasoo ku mashquulsanaa waajibaadka xulalkooda qaranka.
Kooxda Juventus oo dalab xoogan ka gudbisay xiddiga reer Brazil ee Neymar Jr
10-ka xiddig ee ciyaara isboortiga noocyadiisa kala duwan ee lacagaha ugu badan ka hela Instagram-ka oo la shaaciyey & CR7 oo hoggaaminaya!